कांग्रेसका चर्चित नेता बने बदनाम ठेकदारः जसले गरेको पिच एक दिन पनि टिकेन ! « Online Tv Nepal
कांग्रेसका चर्चित नेता बने बदनाम ठेकदारः जसले गरेको पिच एक दिन पनि टिकेन !
Published :6June, 2018 1:23 pm
झापाको धरमपुर-पाँचगाछी सडक खण्ड आसपासका जनताले महिनौं धुलो खाए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत दबाव दिएपछि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले सडक कालोपत्रे गर्‍यो । तर, भोलिपल्टै उप्किन थाल्यो ।
कलंकी नागढुंगा सडकको ३ मध्ये २ वटा खण्डमा शैलुङसँग कान्छारामको ज्वाइन्ट भेञ्चर छ । दुबै ‘कामचोर’ ठेकदार मिलेपनि यो सडकमा बेहाल कायमै छ । झन वर्षा लागेपछि यो सडकमा हिँड्नेहरुको अवस्था कस्तो होला ? अनलाइन खबर बाट